Ny kitendry 29 tsara ampiasaina amin'ny iPhone miaraka amin'ny iOS 8 | Vaovao IPhone
Kitendry 29 hanampy amin'ny iPhone / iPad amin'ny iOS 8
Ignacio Sala | | Fampiharana iPhone, iOS 8
Iray amin'ireo zava-baovao sy fiasa nandrasana hatry ny ela nataon'ny mpampiasa iOS maro ny mety hanampiana kitendry antoko fahatelo hanatsarana ny fomba fanoratantsika amin'ny fitaovantsika. Miaraka amin'ny iOS 8 Apple dia natolotry ny toerana misy anao ny QuickType keyboard izay manome sosokevitra antsika rehefa manoratra.
Fametrahana sy fampiasana an'ity karazana klavier ity dia midika hoe manome alalana fitendry amin'ny data rehetra manoratra miaraka amin'ireto izahay, na kaonty, tenimiafina, adiresy, resaka ... Ny fanazavana an'io fanelingelenana io dia tsy hafa hanandramana hanatsara ny serivisy amin'ny fampiasana ataon'ireo mpampiasa ireo kitendry.
Ny App Store dia tototry ny kitendry antoko fahatelo, tena ilaina sy azo ampiharina. Ny hafa kosa, mifanohitra amin'izany, dia noforonina mba hampiavaka azy ireo ny endriny. Atorinay anao izao, Kitendry 27 mifanaraka amin'ny iPhone sy iPad amin'ny iOS 8.
1 Kitendry iOS 8 tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad
1.6 Adikao Pro Keyboard
1.7 TextExpander 3
1.9 MyScript Stack
1.10 Manaova sary keyboard
1.12 Birao Kaomoji
1.15 Karazana matetika
2 Ampanjifao ny keyboard-nao amin'ny iOS 8
2.1 Kitendry azo ampiasaina ho an'ny iOS 8
2.2 Kitendry Blink
2.3 Kitendry miloko
2.5 Haingo ny klaviko
2.8 Kitendry Pro Colorful
2.9 Cool Keyboard Pro
2.12 Lohahevitra fitendry
3 Kitendry IOS miaraka amina endri-javatra fanampiny
3.1 Kitendry GIF
Kitendry iOS 8 tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad
Iray amin'ireo safidy feno sy feno indrindra ho an'ny fanaingoana izay mamela antsika hanoratra amin'ny tanana iray ihany koa raha manana iPhone 6 Plus isika.
Kitendry ahafahantsika manoratra amin'ny alàlan'ny fivezivezena amin'ny rantsan-tànantsika sy amin'ny fihetsika mba hanao haingana kokoa ny fanoratana.
Amin'ny alàlan'ny fametahana ny rantsan-tananao eo anelanelan'ny litera mamorona ilay teny, dia afaka manoratra amin'ny fomba haingana sy mailaka kokoa isika, indrindra raha tsy manana efijery lehibe loatra sy tsy afa-manoatra izay azon'ny rantsan-tànantsika ny fitaovantsika.
Rehefa manoratra an'ity fitendry ity isika dia mianatra avy amin'ny fihetsika sy fanitsiana izay ataontsika ka somary kely ny làlan'ny fianarana an'ity kitendry ity.
Ity fitendry ity dia ahafahantsika manoratra amin'ny fiteny rehetra noho ny mpandika teny izay manohana hatramin'ny 80 isan-karazany.
Adikao Pro Keyboard
Kitendry iray hafa ahafahantsika mandika ireo lahatsoratra nosoratanay alohan'ny handefasana azy ireo amin'ireo mpandray anay, manohana fiteny 90 ary mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny rindranasa.
Mamela antsika hanoratra amin'ny fanafohezana izay efa namboarinay teo aloha. Ohatra raha manoratra "Telf" isika dia hiseho ny nomeraon-telefaonantsika fa tsy mila manoratra azy. Ity fitendry ity dia mety indrindra ho an'ireo mpampiasa izay tsy maintsy mametaka lahatsoratra mitovy.
Toy ny TextExpander 3, noho io fitendry io dia afaka manoratra isika amin'ny alàlan'ny fanafohezana.
Ny PDA voalohany dia nanana safidy mamela ny fanoratana tamin'ny alàlan'ny fanaovana sary ny litera isaky ny teny. Ho an'ireo nostalgika rehetra amin'ny MyScript Stack dia tadidintsika ireo fotoana ireo.
Manaova sary keyboard
Miaraka amin'ny Draw Keyboard izay ankoatry ny fanoratana dia ahafahantsika mandefa izay ataontsika eo amin'ny efijeren'ilay fitaovantsika. Mety indrindra ny mandray naoty na miresaka amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra toy ny WhatsApp, Telegram ...)
Ny sary sy ny doodling miaraka amin'ny klavie amin'ny iOS dia tsy dia nahafinaritra loatra. Izy io dia mifanaraka amin'ireo rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo noho eo.
Kaomoji, antsoina koa hoe emotikonin'ny Japoney, maneho ny endrika sy fihetsem-po ary ny maha-lahatsoratra azy ireo dia mifanaraka amin'ny hafatra an-tsoratra.
Manararaotra ireo fiasa vaovao an'ny iOS 8, Clips dia mamela antsika handika ny fisafidianana lahatsoratra isan-karazany, hitahiry azy ireo ao anaty rindrambaiko ary hisafidy izay toerana tianay hametahana azy ireo amin'ny kitendry atolotray ity fampiharana ity.
Araka ny lazain'ny sasany, izy dia iray amin'ireo fitendry izay mamela antsika hanoratra haingana be, noho ireo hitsin-dàlana sy fihetsika azo ovaina.
Ity fitendry ity dia ahafahantsika mitahiry ny angon-drakitra soratantsika tsy tapaka (anarana feno, adiresy paositra, mailaka, nomeraon-telefaona ...) ao amin'ny mailaka, hafatra, sms mba hahafahanay manoratra azy ireo amin'ny fikitihan-kitendry roa.
Ampanjifao ny keyboard-nao amin'ny iOS 8
Kitendry azo ampiasaina ho an'ny iOS 8
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra hanamboarana tanteraka ny kitendry aminà fiaviana, loko, fanalahidy, endritsoratra, aloka ary sarimiaina.
Ho fanampin'ny mety ho fanaingoana misy lohahevitra noforonina miaraka amina endrits samy hafa, mamela antsika hanoratra amin'ny tanana iray amin'ny iPhones miaraka amin'ny efijery lehibe kokoa koa izy io.
Miaraka amin'ny Color Keyboard isika dia afaka mandoko, mamolavola ary manamboatra tanteraka ny klavintsika mifanaraka amin'ny zavatra tiantsika.
Mamela antsika hisafidy ny loko tadiavina ho an'ny fitendry, ary koa ny endritsoratra, endrika ary sary mihetsika.
Haingo ny klaviko
Kitendry iray hafa ahafahantsika manaingo azy tsara.
Afaka misafidy endritsoratra 100 sy lohahevitra 10 izahay hanamboarana tanteraka ny fitendry.
Miaraka amin'ny FancyKey isika dia afaka mankafy lohahevitra 45 isan-karazany miaraka amin'ny fiaviany sy ny endriny lehibe.
Kitendry Pro Colorful
Mamela antsika hisafidy ny fomba sy ny loko isan-karazany hanamboarana ny fitendry antsika.
Cool Keyboard Pro
Izy io dia manana lohahevitra 20 samihafa hanamboarana ny fitendry.
Kitendry misy lohahevitra 11 hanamboarana azy araka ny itiavantsika azy.
Io dia ahafahantsika manamboatra ny fitendry aminny loko isan-karazany ao anatin'izany ny mety hanampiana ny sainam-pirenentsika ho ao ambadiky ny fitendry
Araka ny asehon'ilay anarana dia ahafahantsika manamboatra ny fitendry aminny fiaviana sy endrika samihafa.
Amin'ny Type dia azontsika atao ny manamboatra ny fitendry araka izay itiavantsika azy.
Kitendry IOS miaraka amina endri-javatra fanampiny
Raha te handefa GIF na horonan-tsary mihetsika ho an'ny mpifanerasera aminay izahay dia mety tsara ity fitendry ity. Izy io dia manana motera fikarohana GIF mitambatra izay hamelona ny resadresaka ataontsika amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy sy serivisy fandefasan-kafatra mailaka mifanentana amin'ireo karazana rakitra ireo, toy ny Telegram.
Raha manana fanontaniana momba ny fomba ampio kitendry antoko fahatelo amin'ny iOS 8, afaka mamaky ity fampianarana manaraka ity ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Kitendry 29 hanampy amin'ny iPhone / iPad amin'ny iOS 8
cesfloyd dia hoy izy:
Misy klavier misy valiny haptic (vibration) ve rehefa manoratra isika?
Mamaly an'i cesfloyd
Devin Malon dia hoy izy:
Raha mila vibration ianao dia ampindraminiko ity 😉
Valiny tamin'i Devin Malon
Misaotra tamin'ity lahatsoratra ity, tiako ny Touchpal satria misy lohahevitra + fidirana haingana amin'ny emojis + keyboard fitetezana.
Tena nampiasa ny keyboard vaovao tsara lazainao eto aho ary tena amin'ny fampiasa, interface sy customization ny tsara indrindra misy dia ny fleksy! Io no tsara indrindra, nefa ianao tsy nanisy fitenenana hoe mbola tsy nandramako satria lafo io, saingy alohan'ny Alahady dia ividianako azy satria tena toa tsy misy fitendry hafa izany, ilay keyboard izay tsy azonao dia NINTYPE! Araraoty ny horonan-tsary ao amin'ny fampahalalana momba ny fampiharana avy amin'ny fivarotana app!
Marina ny anao. Misaotra amin'ny fampidirana. Vao nanampy an'io aho.
Valiny ho an'i Ignacio Lopez
Azonao atao ve ny milaza amiko raha misy amin'izy ireo manolotra ny endri-javatra SwipeSelection? (Iray amin'ireo tweaks cydia izay manamora ny fiainantsika izany, satria mamela antsika hifindra ao anaty lahatsoratra amin'ny alàlan'ny famindrana ny rantsan-tanantsika ao anaty fitendry)
Rehefa nandeha ny fotoana dia nampiasaiko ary io no iray amin'ireo zavatra tsara indrindra nosedramako !!
Jereo izay ataon'ny fleksy, avelanao eo amin'ny bara habakabaka ny rantsan-tànanao ary ahodinkodina avy eo ankavanana miankavia ary avy eo afindrao ny kursor amin'ny faritra rehetra amin'ny teny, amin'izay ianao afaka mamafa na manampy litera, saingy tsy mifidy ny teny toy izany !
Ankoatr'izay, ny interface miaraka amin'ny sliding amin'ny keyboard dia mamela anao hamafa ny litera sy ny teny, apetraho ny teny soso-kevitra, manodinkodina eo anelanelan'ny sora-baventy sy sora-baventy, apetraho amin'ny habe samihafa ny fitendry ary ny tsara indrindra, miaraka amin'ny fleksy hametrahana emoticon dia ataonao izany. Ny fanindriana ny bokotra fidirana, tsy tahaka ireo hafa izay manindry ny bolongana ka manova anao ny fitendry!
Salama ao amin'ny sary fonosin'ilay lahatsoratra ny keyboard nomerao 4 volondavenona, inona no iantsoana azy? Tiako izany satria manana ny isa eo an-tampony toa ny android izy ary mahomby kokoa noho izany ka misaotra betsaka
Misaotra anao Ignacio fa handefa azy io aho
Misy ve mampiditra ireo isa ao anaty tsipika ambonin'ireo litera mba tsy hiovaova eo anelanelan'ny litera sy isa? toa an'i samsung.
Mamaly an'i jose antonio
Paulus dia hoy izy:
CLIPS izany keyboard izany. manana ny fiasa tadiavinao
Valiny tamin'i Paulus
Hatramin'ny nanoratanao an'ity dia tsy efa mivoaka ny klavier izay tsy mandefa ho azy izay rehetra soratanao?
Ao amin'ny android dia misy klavier mamela anao hitahiry lahatsoratra 10, na dia sakano aza izy ireo mba tsy hamafana azy ireo, dia nantsoina hoe kk emoji. Manazava izany aho satria mitady iray izay mitovy na mitovy amin'ireo toetra nisaorana
Ny clavier izay mamela anao tadiavinao dia Clips, izay ahafahantsika mitahiry lahatsoratra amin'ny fampiharana ary mampiasa azy ireo isaky ny tianao.
hitsahatra dia hoy izy:
Salama, misy keyboard ho an'ny ios ve, misy lakile lehibe? lakile lehibe kokoa amin'ny qwerty iraisana ?? Misaotra anao.
azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba hikarohan-dahatsoratra ho an'ny keyboard gcsgscs
Valiny amin'i FRANK
Misy izao ny iOS 8.1.3, ireto ny vaovaony